"1 Ary amin’izany dia tokony hotandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika, fandrao hindaosina hiala aminy isika. 2 Fa raha mafy ny teny izay nampilazaina ny anjely, ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mbamin’ny fahotana, 3 hataontsika ahoana no fandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? dia ilay nampilazaina ny Tompo tamin’ny voalohany, ary nohamafin’izay nandre tamintsika kosa, 4 sady Andriamanitra koa no niara-nanambara taminy tamin’ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin’ny asa lehibe samy hafa sy ny fanomezana ny Fanahy Masina nozarazarainy araka ny sitrapony. 5 Fa tsy anjely no nampanekeny ny fiainana ho avy, izay lazainay. 6 Fa ny anankiray nanambara eo amin’ny teny iray hoe: "Inona ny olona, no ahatsiarovanao azy? Ary ny zanak’olombelona, no amangianao azy? 7 Nataonao ambany kely noho ny anjely izy; Efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana izy, Ary nampanjakainao amin’ny asan’ny tananao; 8 Ny zavatra rehetra dia efa nampanekenao ho eo ambanin’ny tongony". Fa tamin’ny nampanekeny azy ny zavatra rehetra, dia tsy nisy izay tsy nampanekeny azy. Nefa ankehitriny tsy mbola hitantsika fa efa ampanekena azy ny zavatra rehetra. 9 Fa Ilay natao ambany kely noho ny anjely no hitantsika, dia Jesosy, ary noho ny fitondrany ny fahafatesana dia voasatroka voninahitra aman-daza Izy, mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan’Andriamanitra." Hebreo 2:1-9
Raha tia dia mankatoa. Hita taratra ao anatin’ity Tenin’Andriamanitra ity ny halalin’ny fitiavany ny olombelona. Tsy navelany hijanona ao amin’ny fahotana ka izay hiafarany any dia hiafarany fa novonjeny ary naveriny amin’ny toerana izay noheveriny hasiana azy tamin’ny namoronany azy. Andraikitra goavana be no andrasana amin’izay nahazo izany famonjena izany dia ny mihazona sy mitahiry izany hatramin’ny farany. Ny fankatoavana sy firaisana amin’ny Tompo amin’ny alalan’ny vavaka isan’andro no manampy antsika amin’izany. Ny Fanahy Masina mitoetra ao anatintsika dia tombontsoa lehibe satria mampahatsiahy ny zavatra rehetra Izy. Mahay mihaino ny Fanahy Masina ve isika sa miandry kapoka sy famaizana vao mahatsiaro ny tsy mety natao?
Fampitahana ny olona sy ny anjely. Ambonimbony kokoa ny anjely raha miohatra amin’ny olona saingy ny olona no nataon’Andriamanitra ho mpanjakan’ny zava-boary. Mahazo fikarakarana manokana koa izy satria sarobidy. Ny olombelona no hiara-mandova amin’i Jesosy ny fanjakana mandrakizay. Mba azonao an-tsaina ve izany tombontsoa manokana omena anao izany ry olom-boavonjy? Novonjena ho afaka amin’ny faharatsiana ny olona. Natsangana ho zanaka. Nomena fahefana ho velona mandrakizay.